Gịnị mere i kwesịrị ọdịyo mkpado nchịkọta akụkọ nke? Ọ bụrụ na ị a music hụrụ n'anya, eleghị anya ị nwere ezigbo ego nke music faịlụ ịchekwa na gị PC ma ọ bụ Mac. Ị pụrụ iji categorize music faịlụ iji dị ka ọ nwere ike na-ezi a mgbe ịhọrọ gị playlist ahụ ma ọ bụ ịchọta song gị mkpa. Plus, categorizing gị music ọnụ nwere ike dị nnọọ ka ọ na anya a dum ọtụtụ ngwa nju oyi na ị pụrụ ọbụna na-ege ntị na-ekwu Pop music na oge ma ọ bụ ka Oké Nkume music ọ bụrụ na ị na ọzọ ọnọdụ.
Audio mkpado editọ dị ukwuu maka categorizing gị music collection. Ụfọdụ bụ ndị standalone software na ụfọdụ ndị tinye-na maka music egwuregwu ma niile nwere ike ime ọrụ maka gị. Ọ bụrụ na ị faịlụ nwere mma geo, gị search ga-adị irè na ngwa ngwa. Ebe a bụ ihe kacha mma audio mkpado editọ Windows, Mac, na Linux.
1. Best audio mkpado nchịkọta akụkọ nke Windows
Ebe a bụ anya na otu nke kasị mma audio mkpado editọ Windows.
TagScanner na-mepụtara X development. Ọ bụ a multifunction omume maka ijikwa ma na-ahazi music collection. Mmemme-enye ohere mkpado edezi nke niile audio formats, renaming nke faịlụ dị ka mkpado, ha na mkpado ọmụma si audio filenames na tọghata ederede nke na mkpado ma filenames. Ọ maara iji online nchekwa data dị ka Freedb, Amazon, na Discogs. Ọ na-akwado ID3v 1 / v2, APEv2, vorbis Comments, WMV, na MP4 mkpado. I nwekwara ike n'ịwa na mbupụ playlist n'ụdị HTML ma ọ bụ Excel. Ọ bụ free ibudata na mgbe nile mmelite na-tọhapụrụ mgbe nile.
Atụmatụ na ị ga-n'anya
- akwado ndị niile na ID3 nsụgharị, adaka v1 na v2 mkpado, WMA mkpado, Vorbis Comments na MP4
- akwado agbakwunyere lyrics na-ekpuchi nkà.
- Export ọmụma na formats dị ka HTML, XML, na CSV.
- Ọ na-akwado Multilanguage interface
- Ọ bụ standalone usoro ihe omume onye ọrụ kọmputa - Ya atụmatụ na-agụnye, isi na mkpado, agbatiri mkpado, renaming, na mkpado nhazi. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụchalụ mkpado na-ekpuchi nkà si nchekwa data dị ka Freedb tupu ị na-azọpụta ha. - Ọ bụ ihe na Egbochighi freeware. - Akwado niile isi formats dị ka mp3, mp4, wma, adaka, mpc, AAC, FLAC, spx, ofr, tta, na wv.
- Ya interface bụ unintuitive na-ewe obere oge iji nweta kpọgidere ya. - Dị ka nhọrọ na-elu, ọ na-ewe ihe ọsọ ọsọ karịa gị na-atụ anya. - E nweghị obere version nke software.
2. Best audio mkpado nchịkọta akụkọ nke Mac OS
Music Tag Editor enyemaka ị dezie mkpado ọmụma mfe na n'ụzọ dị irè. Ị nwere ike ogbe edit, nyegharịa na metadata na n'ọgba ederede ngbanwe nke music mkpado. Software nwekwara Ndozi na mismatched ma ọ bụ merụọ Koodu. Ọ na-akwado formats dị ka MP3, M4A, Mp4, ID3 maka FLAC faịlụ.
- Ọ na-akwado ID3 nsụgharị, na iTunes mkpado gụnyere, utu aha, album, nwebisiinka, genre, lyrics, wdg Nke a zọpụtara ọmụma ga-abụ dị n'ihi na ị na ndị ọzọ Apple ngwaọrụ.
- Ọ na-akwado ogbe nhazi N'ihi ya otutu music faịlụ nwere ike scanned .
- ogbe renaming-enye gị ohere ịgbanwe aha si metadata.
- ịgbanwe ma ọ bụ tọghata mkpado ederede ngbanwe na kwa ịrụzi rụrụ arụ na mkpado.
- Site na nke a omume, ị nwere ike ịchọ lyrics na search nhọrọ dị ka LyricsWiki, AZlyrics, MetroLyrics, DarkLyrics na ọtụtụ ọzọ.
- Ọfọn ike na iTunes.
- Ọ nwere oké ọrụ-enyi na enyi interface, nke integrates niile dị mkpa ubi n'ụzọ dị irè.
- Ọ na-nwere ihuenyo zuru mode.
- Kpọgharia aha na ndị ọzọ na ọrụ dị site ngwá ọrụ mmanya.
- Ọ na-ike na iTunes na synchronizes na mkpado na ngwaọrụ ndị ọzọ maka otu onye ọrụ.
- akwado niile formats egwuri site iTunes.
- Ọ bụghị a guzoro naanị software, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ịkpọọ egwu na iTunes.
- E nwere abụghị obere mbipute a software.
- Ọtụtụ mgbe, mgbagwoju anya ruru ọtụtụ elu zuru ezu na otu otu window.
3. Best Audio Tag nchịkọta akụkọ nke Linux
Kid3 audio mkpado nchịkọta akụkọ multiplatform software na-akwado ndị niile na-edezi na mkpado. Na ndị a na software ị nwere ike igbanye mkpado iji filenames na Anglịkan. I nwekwara ike mbubata mkpado site online nchekwa data, nke na-agụnye gnudb.rog, Discogs na ọtụtụ ndị ọzọ. Ngwa-enye gị ohere ịdọrọ na dobe a cover nkà. Ịchọ nkà na lyrics dịkwa mfe. Ọzọ na-agụnye akakabarede n'etiti ID3v1.1, ID3v1.1 na ID3v2.4 mkpado.
- edits mkpado na formats dị ka MP3, ogg / vorbis, DSF, FLAC, MPC, Opus, Speex, WMA, WAV, AIFF na tracker modul.
- Site mkpado maka ọdịnaya na filenames
- Site playlist faịlụ
- akpaghị aka atọghata ala bụrụ na elu ikpe na-eji dochie urụk.
- ebupụ mkpado faịlụ formats dị ka CSV, HTML, XML, na listi ọkpụkpọ.
- Ị nwere ike machiini ọrụ iji iwu akara interface, nke bụ uru nke Linux.
- Ọ bụ a nguzo-naanị ngwaahịa.
- Edits niile mkpado, na n'ịwa ha site na isi mmalite dị ka faịlụ, ọdụ data wdg
- Open isi iyi freeware N'ihi ya ọhụrụ mmelite mgbe niile dị.
- E obere version nke software.
- Akwado multiple nyiwe Linux , Mac OS, na Windows.
- Ọ dịghị nwere kọlụm echiche n'ihi na otutu faịlụ, nke bụ isi ntụpọ.
- Ọ bụrụ na chọrọ iji elu atụmatụ, achọ obere enyemaka nke online akwụkwọ ntuziaka.
- Achọ iwu akara ihe ọmụma machiini ihe aga-eme.
Ndị a niile software pụrụ inyere gị aka ịrụ kasị isi na elu ọrụ maka gị. Ha bụ mfe iji na kwesịrị ị na-ahụ ihe ọ bụla ike, e nwere bụ mgbe ndị online ntuziaka iji ya ọzọ rụọ ọrụ nke ọma. Ọzọ ihe, echegbula banyere categorizing gị music ọ bụla ọzọ ma ọ bụ na emefu awa-agbalị iji nweta playlist ziri ezi. Ugbu a, ị ga-amarakwa dị nnọọ nke music tinye gị na playlist na ọ ga-ewere a otutu oge!
> Resource> Music> The Best Audio Tag Editor Software N'ihi Windows / OSX / Linux